Equinox Desktop Environment (EDE) - Linux အတွက်သေးငယ်။ မြန်ဆန်သော DE Linux မှ
အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူဆက်လက် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် (DEs) ဖြစ်နိုင်တာပေါ့၊ Lumina နှင့် Dracoယနေ့ခေတ်၎င်းသည်အခြားတစ်ခု၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ် ပို၍ မသိရှိသော်လည်းယခင်အမည်များကဲ့သို့ထူးခြားသည် Equinox ဒက်စ်တော့ပတ်ဝန်းကျင် (EDE).
Equinox ဒက်စ်တော့ပတ်ဝန်းကျင် (EDE) DE ကဲ့သို့၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများအနက်၎င်းသည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည် Fast Light Toolkit (FLTK) မှ၊အထူးသဖြင့်အချို့သော C ++ အောက်ရှိ graphical toolkit FLTK စာကြည့်တိုက်များ ပြုပြင်ထားသော (တိုးချဲ့ကိုခေါ်။ ) FLTK သို့မဟုတ်ပဲ eFLTK).
သို့သော်၏ကိစ္စသို့မဝင်ခင် Equinox သို့မဟုတ်ပဲ EDEငါတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောယခင်ထုတ်ဝေထားသည့်လင့်ခ်ကိုသင်တို့တွင်ထားရှိသည် Lumina နှင့် Dracoအခြားမည်သည့်စာနယ်ဇင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသနည်း၊ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ Moksha၊ Deepin Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ် DDE၊ Pantheon၊ Budgie Desktop၊ GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, MATE, LXDE နှင့် LXQT.
1 Equinox - သေးငယ်ပြီးလျင်မြန်သော Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
1.1 Equinox ဆိုတာဘာလဲ။
Equinox - သေးငယ်ပြီးလျင်မြန်သော Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"စွယ်စုံ (တုန့်ပြန်မှု) ဖြစ်ရန်၊ အရင်းအမြစ်များကိုသုံးရန်အလင်းရောင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်တည်ဆောက်ထားသည့်သေးငယ်သည့် Desktop Environment ။ ၎င်းသည် Linux, * BSD, Solaris, Minix, Zaurus နှင့် XBox တွင်ပင်အလုပ်လုပ်သည်။"
နေစဉ်, အပိုင်း၌တည်၏ သင်၏တရားဝင်ဝီကီမှ«အကြောင်း ... » (About) ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် - \_ t
"EDE ကမင်းအတွက်ပါn * nix ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်မြန်ဆန်သော desktop ပတ်ဝန်းကျင်။ ၎င်းသည် FLTK GUI ကိရိယာတန်ဆာပလာကို သုံး၍ အကျွမ်းတဝင်ရှိသောပုံစံကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် UNIX အတွေးအခေါ်နှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ရာ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်သီးခြား executable များကိုပေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် EDE ကိုအလွန် modular ဖြစ်စေပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၏အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။"
Friendly နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော interface သည်၎င်းသည် Windows 95 interface များစွာကိုသတိရစေသည်။
အလွန်လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်း (သို့) အမြန်နှုန်းမြန်ဆန်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်ရန်အချိန်ယူခြင်းအပြင်၊
ကွန်ပျူတာဟောင်းများသာမက embedded devices များသို့မဟုတ်လက်ရှိနေ့စဉ်ကွန်ပျူတာ hardware များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည် C ++ feature များကိုအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည်။ လျင်မြန်စွာ startup၊ memory နည်းမှုနည်းစေခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယခု EDE သည်တည်ငြိမ်သော version 2.1 ကိုသွားသည်, သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်, download လုပ်ဘို့ရရှိနိုင်ပါ သူတို့ရဲ့တရားဝင် site ၏အပိုင်းကို download လုပ်ပါဘယ်မှာအပြင်, သင်မည်သို့မြင်နိုင်ပါသည် compile နှင့် install လုပ်ပါ; သူ၌ရှိသကဲ့သို့ Sourceforge မှာတရားဝင် site ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲ ဖန်သားပြင် သင့်ရဲ့လက်ရှိအမြင်အာရုံသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ထိုမင်း၌ရှိ၏ သတင်းအပိုင်း နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
သတိပြုသင့်ပါတယ် DE သည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲဖြစ်သည် ပြီးသားပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းရှိကြောင်း၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကတည်းက လွှတ်ပေးကတည်းက5နှစ်။ သို့သော်၊ သင်၌ရှိသောသင်၏လက်ရှိအခြေအနေကိုလေ့လာလိုပါက 2.1 ဗားရှင်း, သင်အောက်ပါပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, တူညီတဲ့၏ပြောင်းလဲမှုဖိုင်ကိုရယူနိုင်သည် link ကို။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်ဆိုပါက Debian repositories တွင်မရှိပါ မုတ်၎င်း၏အတွက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အလွန်ကောင်းသောဝီကီ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Equinox Desktop Environment (EDE)», အနည်းငယ်သိ, သေးငယ်တဲ့နှင့်အစာရှောင်ခြင်း Desktop Environment (DE)နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည် Fast Light Toolkit (FLTK) မှ၊C ++ အောက်ရှိ Graphical Toolkit၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Equinox Desktop Environment (EDE) - Linux အတွက်သေးငယ်။ မြန်ဆန်သော DE